October 2017 – Trend.com.mm
တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ရှေးဟောင်း အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာများပါလိမ့် ?
Posted on October 31, 2017 by Noel
တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ အသားအရည်ကလည်းဖြူတဲ့အပြင် စိုပြည်ပြီး မျက်နှာမှာလည်း အစက်အပြောက်မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။သူတို့ဆီမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ထောင်ကျော်တည်းက အခုချိန်ထိလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်တွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ တရုတ်လူမျိုးတွေအများဆုံးလုပ်ကြတဲ့အလှအပနည်းလမ်း ၆ခုကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ရှေးဟောင်း အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာများပါလိမ့် ?
Valentine’s Day ရောက်တဲ့အထိသင်က Single ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက် ၅ချက်
Valentine’s Day ရောက်တဲ့အထိ သင်က Single ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တောင် စိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကို အထီးကျန်မဆန်ပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းလို့ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ ၁။Single » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on Valentine’s Day ရောက်တဲ့အထိသင်က Single ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက် ၅ချက်
Song Song Couple ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ
အခုမှပဲ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းမြင်ရတော့တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်က ညနေ ၄နာရီမှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေရောက်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on Song Song Couple ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ
အနုပညာကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး Kim Joo Hyuk ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့
နာမည်ကျော်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kim Joo Hyuk ဟာ အောက်တိုဘာ ၃၀ရက်နေ့က ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ တနင်္လာနေ့၊ညနေ ၅နာရီလောက်က » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on အနုပညာကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး Kim Joo Hyuk ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့
သင်လုံးဝထင်မထားတဲ့ မိုးပျံပူဖောင်းရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ
Posted on October 30, 2017 by Noel
ပူဖောင်းတွေက ပါတီပွဲ၊မွေးနေ့ပွဲတွေအတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားနေရာတွေမှာလည်းမိုးပျံပူဖောင်းကိုသုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ မိုးပျံပူဖောင်းနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲကြည့်ရအောင် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on သင်လုံးဝထင်မထားတဲ့ မိုးပျံပူဖောင်းရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ
သင့်အိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းထည့်ထားသင့်တဲ့အဓိက ပစ္စည်း ၆ မျိုး
Posted on October 30, 2017 April 19, 2019 by Noel
အပြင်သွားတဲ့အခါ အရေးတကြီးလိုအပ်လာရင်သုံးလို့ရအောင် သင့်အိတ်ထဲမှာအမြဲထည့်ထားသင့်တဲ့ပစ္စည်း ၆ မျိုးရှိပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့… ၁။အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး အပြင်သွားနေတုန်း ခေါင်းကိုက်တာ၊ဗိုက်နာတာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ အလွယ်တကူဆေးလေး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on သင့်အိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းထည့်ထားသင့်တဲ့အဓိက ပစ္စည်း ၆ မျိုး
သင့်မှာရှိနေတဲ့ငွေကို အကျိုးရှိရှိ စုမိဆောင်းမိအောင် ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲကြမလဲ
လက်ထဲမှာငွေလေးများများရှိတာနဲ့သုံးချင်ကြတာလူတွေရဲ့ သဘာဝပါပဲ။ သဘာဝကို လွန်ဆန်လို့မရပေမဲ့ ထိန်းချုပ်လို့တော့ရပါတယ်။သင့်မှာရှိနေတဲ့ပိုက်ဆံတွေကို အကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုစီမံကြမလဲ။မကုန်သင့်တာမကုန်အောင်စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။သုံးမယ့်ငွေကိုသတ်မှတ်ထားပါ တစ်လအတွက် စားတာ၊သောက်တာကအစ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on သင့်မှာရှိနေတဲ့ငွေကို အကျိုးရှိရှိ စုမိဆောင်းမိအောင် ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲကြမလဲ
မနက်ဖြန်ကျင်းပမယ့် Song Song စုံတွဲရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ ပီယာနိုနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမယ့် Park Bo Gum
မနက်ဖြန်ကျင်းပတော့မယ့် Song Song စုံတွဲရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ ပီယာနိုနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးမယ့် သူကတော့ မင်းသားချောလေး Park Bo » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on မနက်ဖြန်ကျင်းပမယ့် Song Song စုံတွဲရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ ပီယာနိုနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမယ့် Park Bo Gum
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့  ၁၀ကြိမ်မြောက် Wara Art ပွဲတော်မှာ ကောက်ရိုးမျှင်တွေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ ကြောက်စရာအရုပ်ကြီးများတွေ့ရ
Posted on October 27, 2017 by Noel
ဂျပန်နိုင်ငံမှာလယ်သမားတွေက မရေမတွက်နိုင်အောင်များပါတယ်။သူတို့ရဲ့ အဓိက အစားအစာကလည်း ထမင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီး ဆန်ရေစပါးတိုးပွားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ ၁၀နှစ်ပြည့် Wara Art » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့  ၁၀ကြိမ်မြောက် Wara Art ပွဲတော်မှာ ကောက်ရိုးမျှင်တွေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ ကြောက်စရာအရုပ်ကြီးများတွေ့ရ
အလှအပအတွက် သင်မသိသေးတဲ့ ကြက်ဆူဆီရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ
ကြက်ဆူဆီဟာ လူတော်တော်များများက သတိမထားမိကြတဲ့ အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ ဆီတစ်မျိုးပါ။အလှအပအတွက်ဆိုရင်ကြက်ဆူဆီက မြန်မြန်နဲ့ထိရောက်စေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဆူဆီကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ ၁။ဆံပင်အတွက်… ဆံပင်ပါးတာ၊ဆံပင်ခဏခဏကျွတ်တာတွေအတွက် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on အလှအပအတွက် သင်မသိသေးတဲ့ ကြက်ဆူဆီရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ